မြီးကောင်ပေါက်များ၏ ဦး နှောက်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာဗေဒ - ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ခြင်းများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များအတွက်သက်ရောက်မှု (2010): အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ၏ Neurobiology
J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010 ဒီဇင်ဘာ; 49 (12): 1189-201; ပဟေဠိ 1285 ။
ကာဇီ BJ, ဂျုံးစ် RM.
Developmental Psychobiology များအတွက် Sackler Institute မှ, Weill အတှကျကော်နဲလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်, နယူးယောက်, NY 10065, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်မကြာသေးမီကဖြစ်ပေါ်လာသောလူ့ပုံရိပ်နှင့်တိရိစ္ဆာန်ဆိုင်ရာအလုပ်များကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပေါ်ရှုမြင်ပုံနှင့် ဆက်စပ်၍ အစောပိုင်းပေါ်ထွက်လာသော“ အောက်ခြေမှအထက်” စနစ်များအကြားစိတ်အားတက်ကြွစေသည့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသော“ အထက်မှအောက်” သိမြင်မှုထိန်းချုပ်သည့်ဒေသများဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းအကြားတင်းမာမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုဖော်ပြသည်။ ။ အပြုအမူ၊ လက်တွေ့နှင့် neurobiological အထောက်အထားများကိုဤစနစ်နှစ်ခုအားကြီးထွားစေရန်ခွဲထုတ်ခြင်းအတွက်သတင်းပို့သည်။ ဦး နှောက်တွင်အရက်၏သက်ရောက်မှုနှင့်၎င်း၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုဂုဏ်သတ္တိများကိုဤစနစ်နှစ်ခု၏အခြေအနေတွင်ဆွေးနွေးထားသည်။
စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများ 13 နှစ် 17 ကနေအမြင့်ဆုံးတစ်ခုနဲ့ပက်ပင်းအတူစိတ်ခွန်အားနိုးအပြုအမူနှင့်နောက်ခံ subcortical ဦးနှောက်ဒေသ curvilinear ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပြသပါ။ ဆနျ့ကငျြ, prefrontal ဒေသများ, အပြုအမူထိပ်-Down စည်းမျဉ်းအတွက်အရေးကြီးသော, မျဉ်းပြိုင် Impulse ၏အမူအကျင့်လေ့လာမှုများတွင်တွေ့မြင်ကြောင်းကိုကောင်းစွာငယ်ရွယ်လူကြီးသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦး linear ပုံစံကိုပြသ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထိုအဖွံ့ဖြိုးဆဲစနစ်များအကြားတင်းမာမှုသို့မဟုတ်မညီမမျှအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများဖို့မက်လုံးပေး-based မော်ဂျူနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်ဖို့ပိုအားနည်းချက်ဖြစ်ခြင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, အစာစားချင်စိတ်တွေကိုမျက်နှာ၌သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလိုအပ်ကြောင်းအပြုအမူစိန်ခေါ်မှုများဆယ်ကျော်သက်အရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ရသောကြိုတင်ခန့်မှန်းဘို့အဖြစ်အသုံးဝင်သော biobehavioral အမှတ်အသားများအားဝတျပွုနိုငျသညျ။
ကလေးသူငယ်များ၏မူပိုင်ခွင့်© 2010 အမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ All rights reserved Elsevier Inc ကိုထုတ်ဝေသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့အပါအဝင် concomitantly ကြုံတွေ့အများအပြားအပြောင်းအလဲများ, လွတ်လပ်ရေးမောင်း, လူမှုရေးနှင့်သက်တူရွယ်တူအပြန်အလှန်၏တိုးလာ salience နှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိပါတယ်သည့်အခါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးသငြ်ကူးေူပာင်းမြကာလဖြစ်ပါသည် 1-3။ ဤသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလတွင်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အတူလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်, ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုအပါအဝင်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေအတွက်တစ်ခုနဲ့ပက်ပင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေများ၏အာရုံကြောအခြေခံနားလည်ခြင်းထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာမှီခိုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုဆင်းရဲသောသူကဲ့သို့ရလဒ်များအတွက်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ရသောဆယ်ကျော်သက်ဖော်ထုတ်အတွက်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ယူဆချက်တစ်ခုအရေအတွက်ကမြီးကောင်ပေါက်ထကြွလွယ်သောနှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့် postulated ပါပြီ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ရိုးရာအကောင့်ကသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစွမ်းရည်၏အဆငျ့ဆငျ့ သာ. ကြီးမြတ်ထိရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကာလကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပုံရိပ်အားဖြင့်သက်သေအဖြစ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဒီထိရောက်မှုအဆိုပါ prefrontal cortex ၏ရငျ့အပေါ်မှီခိုအဖြစ်ဖော်ပြနေသည် 4-7 နှင့်ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလေ့လာမှုများ post8-10 ကောင်းစွာငယ်ရွယ်လူကြီးသို့ဤဒေသ၏ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးဖေါ်ပြခြင်း။
အဆိုပါ prefrontal cortex ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အတူတိုးတက်လာသောသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကလေးဘဝထဲကနေလူကြီးဤစွမ်းရည်အတွက် linear တိုးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သို့သျောလညျးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိ suboptimal ရွေးချယ်မှုနှင့်လုပ်ရပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဦးတစ်ခုနဲ့ပက်ပင်းကိုယ်စားပြု 11 ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူနှင့်သေဆုံးမှုအပေါ်ကျန်းမာရေးစာရင်းအင်းများအတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာတို့ကသက်သေအဖြစ်အကြောင်း, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်လူကြီးဖြစ်စေထံမှထူးခြားသောဖြစ်ပါသည် 12။ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်တစ်ဦးနု prefrontal cortex တစ်ဦးတည်း suboptimal ရွေးချယ်မှုအပြုအမူများအတွက်အခြေခံခဲ့ကြသည်လျှင်, သားတို့သည်မိမိတို့လျော့နည်းဖွံ့ဖြိုးပြီး prefrontal cortex နဲ့သိမြင်မှုစွမ်းရည်ပေးထား, ဆယ်ကျော်သက်ထက်သိသိသာသာအလားတူသို့မဟုတ်ယူဆရပိုဆိုးကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် 2။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဦးနှောက်အန္တရာယ်များနှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူအတွက်အများကိန်းများရှင်းပြစေခြင်းငှါမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပြောင်းလဲနေပါတယ်မည်သို့မူလတန်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအမှာစကားပြောကြား။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဤကာလအတွင်းအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထပ်မံဤပြောင်းလဲမှုများပိုမိုဆိုးရွားနိုင်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်ပုံကိုဥပမာများကိုပေးစွမ်းပါသည်။
တိကျစွာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသိမြင်မှုနှင့်အ neurobiological အပြောင်းအလဲများကိုဖမ်းဆီးဖို့, ဒီကာလအချိန်တစ်သငြ်ကူးေူပာင်းမြတဦးတည်းထက်တစ်ခုတည်းလျှပ်တစ်ပြက်အဖြစ်ကုသရမည်ဖြစ်သည် 3။ ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်တစ်နည်းအတွက်, သို့နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထဲကအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကတခြားအချိန်မှတ်ဤကာလအတွင်းဆွေမျိုးများ၏ကွဲပြား attribute တွေကွဲပြားခြားနားသွားဘို့လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, သိမြင်မှုနှင့်အာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်များအဘို့လူကြီးဖို့ကလေးဘဝထဲကနေဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာတည်စေသည်ဟုပင်ကိုယ်မူလဒေတာကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဦးနှောက်သို့မဟုတ်အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူအတားအဆီးပိုမိုအရေးကြီးသည်ကဤအကူးအပြောင်း characterizing အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်ကြပြီး။
ဒုတိယအချက်မှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏တိကျသောပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုဤကာလ၏ phenotypic စရိုက်လက္ခဏာတွေအတွက်သနျ့လိုအပ်သည်။ ဥပမာ, အမူအကျင့်အဆင့်တွင်, မြီးကောင်ပေါက်ကိုမကြာခဏနီးပါးပြောရလျှင်ကိုအသုံးပြုသည်ဤဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူထကြွလွယ်သောနှင့်ပိုမိုအန္တရာယ်-takers အဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ သို့သျောလညျးဤဆောက်လုပ်ရေးကွဲပြားကြသည်နှင့်ဤဂုဏ်ထူးကိုတန်ဖိုးထားသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာအာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပြုဖော်ပြဘို့အရေးကြီးပါသည်။ ကျနော်တို့ Impulse ဆင်းရဲသောသူသည်ထိပ်တန်းချသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်သော်လည်းအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေပိုပြီးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မက်လုံးပေး (အာရုံ-ရှာ) မှ sensitivity ကိုအတူ coupled ကြောင်းအကြံပြုကြောင်း, အမူအကျင့်လက်တွေ့နှင့် neurobiological သက်သေအထောက်အထားသည်။
သီအိုရီအသည့်ပင်ကိုယ်မူလတွေ့ရှိချက်မြေပေါ်မှာကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များအတွက်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် neurobiological မော်ဒယ်များကိုဤအချိန်ကာလအတွင်းဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကြံပြုအရက်သေစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်အားနည်းချက်များအတွက်တိုးမြှင့်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် psychopathologize မှမဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမှအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်အချို့သောဆယ်ကျော်သက်မဟုတ်မဟုတ်ဘဲရှင်းပြရန်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျနော်တို့အစောပိုင်းဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကြားဝင်၏ရလဒ်ကိုအကဲဖြတ်ဘို့အလားအလာဇီဝဗေဒနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအမှတ်အသားများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစား။
ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဖြေ neurobiological မော်ဒယ်2ကြောင်းကြွက်မော်ဒယ်များအပေါ်တည်ဆောက် 13, 14 မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်မကြာသေးမီကပုံရိပ်လေ့လာမှုများ 6, 7, 15-20 သရုပ်ဖော်နေသည် ပုံ 1။ ဒါကမော်ဒယ်တိုက်နယ်အဖြစ်အတူတကွထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်ကိုဘယ်လို subcortical နှင့်အထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုဒေသများ prefrontal ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါကာတွန်း limbic စီမံချက်များအစောပိုင်းက prefrontal ထိန်းချုပ်မှုဒေသများထက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အတူဤဒေသများအချက်ပြဘို့ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲပြသထားတယ်။ စံပြအဆိုအရဆယ်ကျော်သက်ဒီ frontolimbic circuitry နေဆဲဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကိုများအတွက်ကလေးများ, နှိုင်းယှဉ်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလျော့နည်းရင့်ကျက် cortical circuitry (စနစ်များမှီခိုအတွက်ဆိုလိုသည်မှာမညီမမျှ) မှ function ရင့်ကျက် subcortical ဆွေမျိုးများက biased လျက်ရှိ၏ ဤစနစ်များကိုအပြည့်အဝရင့်ကျက်ဖြစ်ကြအကြင်အဘို့အရွယ်ရောက်မှနှိုင်းယှဉ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဤဒေသများအကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့် subcortical စနစ်များထိပ်ချမော်ဂျူများအတွက်ယန္တရားကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည် 7။ ထိုသို့ Impulse နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးတစ်လွှားရှုလေ့လာအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုရှင်းပြဖို့ယန္တရားပေးစေခြင်းငှါဤအ circuitry အတွင်းဆက်သွယ်မှု၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခိုင်မာ, အတူအဆိုပါ frontostriatal circuitry ဖြစ်ပါတယ်။
ဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီး ventral striatal နှင့် prefrontal cortex (PFC) interaction က၏ကာတွန်းမော်ဒယ်။ နက်ရှိုင်းအရောင် သာ. ကြီးမြတ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်ပြဖော်ပြသည်။ လိုင်းရင့်ကျက်ကွန်နက်ရှင်နဲ့တွေက dotted line ကိုညွှန်ပြညွှန်ပြအစိုင်အခဲလိုင်းနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုကိုယ်စားပြုတယ် ...
ဤပုံစံသည်ယခင်သူတွေနဲ့အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် 21-24 ကြောင်းအတွက်ကြောင့်လျော့နည်းရင့်ကျက်ထိပ်တန်းချ prefrontal မြားဆွေမျိုး subcortical စီမံကိန်း၏အစောပိုင်းကရငျ့ရန်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေလူကြီးဖို့အပြုအမူအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ nonlinear အများကိန်းများများအတွက်အခြေခံပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် triadic မော်ဒယ် 21 လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူသုံးခုကွဲပြားအာရုံကြောဆားကစ် (ချဉ်းကပ်မှု, ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း) ရှိကြောင်းကမ်းလှမ်းထားသည်။ အဆိုပါချဉ်းကပ်မှုစနစ်ကအကြီးအကျယ် prefrontal cortex အားဖြင့် ventral striatum, ရှောင်ရှားခြင်းဟာ amygdala တို့ကစနစ်နှင့်နောက်ဆုံး, ထိုစည်းမျဉ်းစနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည် 25။ ဒါကြောင့်ဦးနှောက်အဘို့ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားအတွက် grounded ကြောင်းအတွက်လက်ရှိမော်ဒယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေလူကြီးဖို့အကူးအပြောင်း၌မသာပြောင်းလဲပေမယ့်အစားအကူးအပြောင်းအခြားသူများထံမှအကြီးအကျယ်မတူ သို့ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် ထဲက လူကြီးသို့ adolescence ။ ထို့ပြင်မော်ဒယ် striatum နှင့် amygdala ကဤအဆောက်အဦများ၏ valence လွတ်လပ်ရေးဖေါ်ပြခြင်းမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများပေးထားချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားရန်အပြုအမူမှတိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုပါဘူး 26ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲလုပ်နိုင်တဲ့ဘက်လိုက်မှုအပြုအမူကြောင့် motivationally နှင့်စိတ်ခံစားမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သက်ဆိုင်ရာတွေကိုဖော်ထုတ်မယ်အတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းစနစ်များဖြစ်ကြသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ကလေးဘဝထဲကနေလူကြီးဖို့အကူးအပြောင်းသရုပ်ဖော်သောငါတို့မော်ဒယ်များ၏အခြေအနေတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အမူအကျင့်နှင့်လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်လတ်တလောသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြရန်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၏ Phenotypic စရိုက်လက္ခဏာတွေ
ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏မျက်နှာသာအတွက်သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစွမ်းရည်အတွက်ချုံးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်များအပြုအမူများ၏အလွန် core ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အကြံပြုခဲ့ကြ 27။ ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်၏သွေးဆောင်မှုသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးရာမှခုခံပါဝင်သောသိမှုထိန်းချုပ်ရေး, လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှင့်သိမြင်မှုစိတ်ပညာ၏အခြေအနေတွင်လေ့လာခဲ့ပြီ။ Developmental, ဒီစွမ်းရည်ကိုပိုကြီးတဲ့ဆုလာဘ်၏မျက်နှာသာအတွက်ကလေးငယ်တစ်ဦးကိုချက်ချင်းဆုလာဘ် (ဥပမာ, တစ်ဦး cookie ကို) ကိုတှနျးလှနျနိုငျပုံကိုရှည်လျားအကဲဖြတ်တိုင်းတာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် (ဥပမာနှစ်ခု cookies များကို) 28။ တစ်ဦးချင်းစီကိုပင်အရွယ်ရောက်သူအဖြစ်ဤစွမ်းရည်အတွက်ကွဲပြားပေမယ့်တစ်ဦးချင်းသွေးဆောင်ဖို့အထူးသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်အခါ, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပြတင်းပေါက်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်စွမ်းရည်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ပုံစံကိုအဖြစ်ဖော်ပြထားသည် 29 ထိုသို့ဘက်စုံဖြစ်ပါသည် 30, 31ဒါပေမယ့်စစ်ဆင်ရေးအဓိက, ယှဉ်ပြိုင်သွင်းအားစုများနှင့်လုပ်ရပ်များ၏မျက်နှာများတွင်ဂိုးညွှန်ကြားအပြုအမူပြီးမြောက်နိုင်စွမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် 32.
သမိုင်းကြောင်းအရ, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများလူကြီးမှနို့စို့အရွယ်ကနေသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစွမ်းရည်အတွက်တည်ငြိမ်တိုးတက်မှုပြသကြ 33။ ဤသည်လေ့လာရေးတစ်မှန်ကန်သောတဦးတည်းအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာထိုကဲ့သို့သော Go ကို-NoGo တာဝန်ရှိမုန်တာဝန်နှင့် prepotent တုံ့ပြန်မှုပယ်ဖျက်ဖို့သင်တန်းသားများကိုလိုအပ်ကြောင်းအလုပ်တစ်ခုကို-switching Paradigm အဖြစ် Paradigm အပါအဝင်ထိန်းချုပ်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်း setting တွင်စမ်းသပ် Paradigm ကနေအမူအကျင့်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုဥစ္စာဓနအားဖြင့်ပံ့ပိုး 32, 34။ သို့ရာတွင်ထိုသို့မက်လုံးပေး-related တွေကိုတစ်တုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်ဖို့အကျိုးရှိအခါ, သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဆငျးရဲဒုက်ခ 20။ ဒီအလျှော့ထိန်းချုပ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ကာလအတွင်းအထူးသဖြင့်ထင်ရှား၏အခါ suboptimal ရွေးချယ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်အပြုအမူတွေအထွတ်အထိပ်အတွက် 3, 11, 12, 14။ ယင်းတွေ့ရှိချက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြပြီးသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးတောင်းဆိုချက်များကိုစိတ်ခွန်အားနိုး drives တွေကိုသို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုသို့မဟုတ်အားဖြည့်အခင်းအကျင်း (ဥပမာ, လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction က), နေဖြင့် modulated နိုင်ဆိုလို။
လှုံ့ဆျောမှုကအနည်းဆုံးနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး modulate နိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာပေးထားသောတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ဆုခံရလူတွေကခက်အလုပ်လုပ်စေနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဆုခခြံမဟုတ်သည့်အခါထက်ပိုကောင်းလုပ်ဆောင် 17။ အစာစားချင်စိတ်တွေကိုဆီသို့အတွေးများနှင့်လုပ်ရပ်များဖိနှိပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါဒုတိယ, ထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုဖို့စွမ်းရည်စိန်ခေါ်နိုင်ပါတယ် 20။ ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လတ်တလောလေ့လာမှုများစိတ်ခွန်အားနိုးအခင်းအကျင်းနှိုင်းယှဉ်အတော်လေးကြားနေအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစွမ်းရည်နှိုင်းယှဉ်ဖို့စတင်ပါပြီ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များမှာအထူးသဖြင့်ဆုချ-based သူတို့, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမှ sensitivity ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုအကြံပြုလျက်, ဆယ်ကျော်သက်နှစ်တာကာလအတွင်းသိမှတ်ခံစားမှုပေါ်လှုံ့ဆျောမှု၏တစ်မူထူးခြားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အောက်ပါအပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့အပြုအမူလူကြီးများမှဆွေမျိုးစိတ်ခံစားမှုတရားစွဲဆိုအခင်းအကျင်းအတွက် differential ဘက်လိုက်သည်မည်မျှဆယ်ကျော်သက်များ၏လတ်တလောလေ့လာမှုများအချို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
ဥပမာအားဖြင့်, Ernst နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ 35, 36 အချို့သောစမ်းသပ်မှုတွေသော်လည်းမအခြားသူတွေအပေါ်တိကျသောစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်တစ်ခုဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောနဲ့ antisaccade တာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များတစ်ဆုလာဘ်၏ဂတိတော်ကိုပြပိုပြီးလူကြီးများသည်ထက်ပုံတူကူးယူထားသည်တဲ့တွေ့ရှိချက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအပြုအမူ facilitated 17 နှင့်မကြာသေးမီကလူမှုရေးဆုလာဘ် (ဥပမာပျော်ရွှင်မျက်နှာများတိုးချဲ့ခဲ့ 20).
ယခင်ဥပမာမက်လုံးပေးနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပိုမိုစွမ်းဆောင်ရည်၏သာဓကများကိုနေစဉ်မြင့်မားသောအမြတ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းဆုလာဘ်မှတုံ့ပြန်မှုနှိပ်ကွပ်သောအခါဆုလာဘ်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်မနုတ်နိုင်။ ဥပမာ, လောင်းကစားဝိုင်းတာဝန်သုံးပြီးဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ (တာဝန်-ရူးနှမ်းကိုထိခိုက် arousal ကြီးထွားရာ "ပူ" စမ်းသပ်မှုတွေ) စဉ်အတွင်းချက်ချင်းပေးအပ်ခဲ့သည့်အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက် (စမ်းသပ်မှုတွေအောင် "အအေး" တမင်ဆုံးဖြတ်ချက်), Figner နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအပြီးသည်အထိဆီးအတား 37 မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်နှိုင်းယှဉ်အချိုးအစားမမျှမကပိုအန္တရာယ်များလောင်းကစားလုပ်ပေမယ့်ကိုသာ "ပူ" အခြေအနေကြောင့်ပြသခဲ့သည်။ အလားတူလုပ်ငန်းတာဝန်သည်အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကို, Cauffman နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအသုံးပြုခြင်း 38 ဆုလာဘ်များနှင့်မက်လုံးပေးရန်ဤ sensitivity ကိုအမှန်တကယ်ကတ်များကိုပိုပြီးအကျိုးရှိကုန်းပတ်နှင့်အတူဆော့ကစားရန်စိတ်သဘောထားအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှောင်းပိုင်းမှငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကမှန်မှန်တိုးပြီးတော့လူကြီးနှောင်းပိုင်းမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေနောက်ဆက်တွဲကျဆင်းမှုနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအများဆုံးကြွေကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် 13 နှင့် 17 အကြားအကြမ်းအားဖြင့် peaking တစ် curvilinear function ကိုသရုပျဖျော, ပြီးတော့ကျဆင်းနေ 27။ အဆိုပါအိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အတူကြိုတင်တွေ့ရှိချက်အသက်အရွယ်နှင့်အတူစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် linear တိုးပြခဲ့ကြပေမယ့် 39ဤလေ့လာမှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အသက်အရွယ်မှာမကြည့်ခဲ့ကြမဟုတ်သလိုသူတို့ကဒ်များအကျိုးရှိကုန်းပတ်နှင့်အတူသာစမ်းသပ်မှုတွေဆနျးစစျခဲ့သညျ။
မကြာမီကလေ့လာမှုများလူမှုရေးအခင်းအကျင်း, အထူးသဖြင့်ရွယ်တူချင်းလည်းတစ်ဦးစိတ်ခွန်အားနိုး cue အဖြစ်ဝတ်ပြုမည်အကြောင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလျော့နိုင်ပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာထားတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးရဲ့ရွယ်တူချင်းတ္ထုများအသုံးပြုနေသည်ဖို့ဒီဂရီအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုသုံးပါလိမ့်မည်ဟုအရက်သို့မဟုတ်တရားမဝင်တ္ထုများပမာဏတိုက်ရိုက်အချိုးကျကြောင်းပြသလျက်ရှိသည် 40။ တစ်ဦး simulated မောင်းနှင်မှုတာဝန်, Gardner နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအသုံးပြုခြင်း 41 မြီးကောင်ပေါက်လာသောအခါတစ်ဦးတည်းထက်ရွယ်တူချင်းအများတို့ရှေ့၌ riskier ဆုံးဖြတ်ချက်များစေနှင့်ဤအန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်များအသက်အရွယ်နှင့်အတူ linearly လျော့ကြောင်းကိုပြသကြ 23, 40.
အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအလားအလာဆုလာဘ်၏စိတ်ခွန်အားနိုးတွေကိုအထူးသဖြင့်အဓိကဖြစ်ကြောင်းနှင့်စစ်ကူသို့မဟုတ်ဆုခခြံရလဒ်ကိုအဖြစ်, ဒါပေမယ့်တစ် cue အဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးသည့်အခါ riskier ရွေးချယ်မှုသို့မဟုတ် suboptimal ရွေးချယ်မှုမှပေးအပ်သည့်အခါတိုးတက်စွမ်းဆောင်ရည်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌, စိတ်ခွန်အားနိုး cue ထိရောက်သောရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူလျော့နိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်ဤလေ့လာမှုများဆုလာဘ်များနှင့် sensation- ရှာအပြုအမူမှ sensitivity ကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံစံများ (အသီးသီးတစ်ဦး linear function ကိုနှိုင်းယှဉ် curvilinear function ကို,) နဲ့ Impulse ထံမှကွဲပြားဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာဂုဏ်ထူး Steinberg et al ကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာနောက်ထပ်ထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ 42 sensation- ရှာခြင်းနှင့် Impulse ၏ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာအစီအမံကိုသုံးနိုင်သည်။ သူတို့ကအာရုံခံစားမှု-ရှာခြင်းနှင့် Impulse ၏မကြာခဏ-conflated Construction 1000 နှင့် 10 ၏အသက်အရွယ်အကြားနီးပါး 30 တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇယားတလျှောက်ဖွံ့ဖြိုးရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ရလဒ်အာရုံ-ရှာကြံအသက်အရွယ်နှင့်အတူအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအာရုံ-ရှာကြံအတွက်ထိပ် 10 နှင့် 15 နှစ်အကြားတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ကျဆင်းနေသို့မဟုတ်အဲဒီနောက်တည်ငြိမ်ကျန်ရှိသောနှင့်အတူတစ် curvilinear ပုံစံနောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, Impulse အတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု (ကြည့်ရှုနေတဲ့ linear ဖက်ရှင်အတွက်အသက်အရွယ်နှင့်အတူ Impulse လျော့ကျလာနှင့်အတူတစ် linear ပုံစံနောက်တော်သို့လိုက် ပုံ2panel ကိုတစ်ဦး) ။ အတူတကွဓာတ်ခွဲခန်းအခြေစိုက်တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်တာ risk- မှကြီးထွားအားနည်းချက်အကြံပြု "ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤကာလ၏ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်း Self-ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတော်လေးနုစွမ်းရည်ရှာမှုကြောင့်အတော်လေးမြင့်မားတဲ့စိတျ၏ပေါင်းစပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်" 42.
sensation- ရှာခြင်းနှင့် Impulse များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသင်တန်းများ၏ပုံဥပမာ။ ကနေအဆင်ပြေအောင်အသက်အရွယ်တစ် function ကိုအဖြစ်အာရုံ-ရှာခြင်းနှင့် Impulse ၏ Panel ကိုအေကြံစည်မှု ( 42) ။ ဆုချမှအထိခိုက်မခံဦးနှောက်ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများ Panel ကိုခကြံစည်မှု ...
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်အတွက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်အမျှမှတ်ဥာဏ်နဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးအပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနှစ်ခုသော့ချက်ဒေသများသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်သိ prefrontal cortex ဖြစ်ကြ၏ 43 ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဝတ္ထုနှင့်ကြိုးတွေကိုအကြောင်းကိုဖော်ထုတ်မယ်နှင့်သင်ယူခြင်းနှင့် striatum ဝေဖန် 44။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီတိရိစ္ဆာန်နှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာခြင်းနှင့် Impulse ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ယခင်အမူအကျင့်တွေ့ရှိချက်များ၏အခြေအနေတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖြတ်ပြီးထိုအစိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်သိမြင်မှုစနစ်များကိုထောက်ပံ့ neurobiological အပြောင်းအလဲများအပေါ်လူ့ပုံရိပ်အလုပ်မီးမောင်းထိုးပြ။ ကျနော်တို့တွေ့ရှိချက်မြေမှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အဓိကတွေကိုဖော်ထုတ်မယ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက် Bottom-Up striatal ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများအတွက် curvilinear function ကိုမှဆွေမျိုးထိပ်တန်းချ prefrontal ဒေသ linear ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ယခင်ကဖော်ပြထားမညီမမျှပုံစံကိုအသုံးပြုပါ။ အထူးသဖြင့်ရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုအခြေခံကြောင်း frontostriatal ဆားကစ်အတွင်းမှာမဟုတ်ဘဲတိကျတဲ့ဒေသဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုထက် circuitry ဆန်းစစ်၏အရေးပါမှုကိုအဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ရှုထောင့်ကွယ်ပျောက်ချင်းစီဒေသသူတို့အပြန်အလှန်ဆားကစ်၏အခြေအနေတွင်အပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့မှအထီးကျန်မှုတွေအတွက်ရင့်ကျက်ဘယ်လိုစာမေးပွဲထံမှလယ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေး။
seminal တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့အလုပ်ကို cortical ဒေသများရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူပုံဖော်ဘယ်လို striatal နှင့် prefrontal ပြသခဲ့သည် 7, 27, 37, 38, 44။ Pasupathy & Miller တွင်တစ်ယူနစ်အသံသွင်းထားခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်း 45 , ပြင်သာပြောင်းသာဆုလာဘ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်အစုတခုသင်ယူသောအခါ, striatum အတွက်အလွန်အစောပိုင်းလှုပ်ရှားမှုဆုလာဘ်-based အသင်းအဖွဲ့များများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းနောက်ပိုင်းတွင်ပိုမို deliberative prefrontal ယန္တရားများအကြီးမြတ်ဆုံးလာဘ်ပိုကောင်းအောင်နိုငျသောအမူအကျင့်ရလဒျကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စေ့စပ်နေကြတယ်သော်လည်းဤတွေ့ရှိချက်များရှိသည်ဟုသရုပ်ပြ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာမှုများအတွက်ပုံတူကူးယူခဲ့ 46-48။ prefrontal ဒေသများတွင် activation စတင်ခြင်းမှကြိုတင်ဆုလာဘ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်၏အစောပိုင်းယာယီနိုင်တဲ့ coding ထဲမှာ striatum တစ်အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းလူသားတိုးချဲ့ထားပြီး 49။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် (မိမိတို့၏အစိတ်အပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူ) ဒေသများအကြားအပြန်အလှန်နားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းအကြံပြု; frontostriatal circuitry အတွင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်သိမြင်မှုနှင့်အစိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုမော်ဒယ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဘို့အရေးကြီးသည်။
Frontostriatal ဆားကစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာပီပီခံယူ 50-53 အဆိုပါ dopamine စနစ်အထူးသဖြင့်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း။ dopamine receptors တွေရဲ့သိပ်သည်းဆအတွက် Peak, အ striatum အတွက် D1 နှင့် D2 ငယ်ရွယ်လူကြီးများကထိုအ receptors တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်စောစောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဖြစ်ပွား 54-56။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, prefrontal cortex နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးသည်အထိ D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအတွက်ထိပ်မပြပါဘူး 57, 58။ အလားတူဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို cannabinoid receptors အပါအဝင်အခြားဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောစနစ်များကိုမှာပြခဲ့ကြ 59။ ဒါဟာအငြင်းပွားဖွယ်ရာဆုလာဘ် sensitivity ကို dopamine စနစ်များ (ဥပမာအားဖြင့် modulated ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိအဖြစ်ကျန်ရှိနေဆဲအဖြစ် dopamine စနစ်များအတွက်အပြောင်းအလဲများလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူဆက်စပ်ပုံကိုမရှင်းလင်းဖြစ်နေဆဲ, 60, 61) နှင့်ကလျော့နည်းတက်ကြွသို့မဟုတ် hypersensitive dopamine စနစ်များ (ဥပမာ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်, ဟုတ်မဟုတ် 62, 63) ။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်း dopamine ကြွယ်ဝသော circuitry အတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုပေးထားသောကြောင့်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်လူကြီးများထံမှကွဲပြားဆုလာဘ်မှ sensitivity ကိုပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ဖွယ်ရှိသည် 50, 64။ dopamine receptors အတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုတဘက်, frontostriatal ဆားကစ်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်ဦးတည်သွားစေသည်ဟုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ရသောသိသိသာသာဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအလုပ်လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုလည်းရှိပါတယ် 65သို့သော်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှုဤစာတမ်း၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါသည်, ကြည့်ရှု 66, 67 ဘာသာရပ်အပေါ်အသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်။
လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများဖှံ့ဖွိုးတိုးတကိုဖြတ်ပြီး, dopamine ကြွယ်ဝသော frontostriatal circuitry ၏ဆက်သွယ်မှုအတွက်ခိုင်ခံ့စေဘို့ထောက်ခံမှုများကိုစတင်ပါပြီ။ ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်နှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု (fMRI), Casey နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအသုံးပြုခြင်း 68, 69 နှင့်အခြားသူများ 70 ဖှံ့ဖွိုးတိုးတတလွှားကဤ circuits များအတွင်း distal ဆက်သွယ်မှုအတွက် သာ. ကြီးမြတ်သောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကိုပြသခဲ့ကြပြီးထိရောက်စွာပုံမှန်အားနှင့် atypically ဖွံ့ဖြိုးဆဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စွမ်းရည်နှင့်အတူ prefrontal နှင့် striatalregions အကြားဆက်သွယ်မှုကိုခှနျအားဗလနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ 68, 69။ ဒီလေ့လာမှုတွေကိုထိရောက်စွာသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စွမ်းရည်ကိုထောကျပံ့ပေးသော corticostriatal circuitry အတွင်းအချက်ပြ၏အရေးပါမှုကိုဖျောပွ။
အလားတူ, striatum နှင့် prefrontal cortex Interactive နဲ့တူစနစ်များကိုမြီးကောင်ပေါက်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအန္တရာယ်များအပြုအမူမှမြင့်တက်ပေးဖို့ဘယ်လို subcortical အပေါ်လူ့အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများကနေ mounting သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် 71။ ပုံရိပ်လေ့လာမှုအများစု, တစ်ဦးသို့မဟုတ်သော prefrontal cortex ဖေါ်ပြခြင်းအခြားဒေသများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အသက်အရွယ်-related တိုးတက်မှု subserve မှထင်ကြပါပြီ 72-78 နှောင့်နှေးရငျ့ခြင်းကိုသည်းခံ 4, 79, 80 striatal အသစ်အဆန်းမှအထိခိုက်မခံဒေသများနှင့်ဆုလာဘ်ထိန်းသိမ်းရေးအစောပိုင်းကဖွံ့ဖြိုးနေချိန်တွင် 74, 81။ အတော်ကြာအုပ်စုများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါမျှော်လင့်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်များလက်ခံရရှိမှုအတွက် ventral striatum ၏ကြီးထွား activation ပြသသောပြသကြ 6, 15, 17, 18ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေတစ် hypo-တုန့်ပြန်သတင်းပို့ 82.
လူကြီးဖို့ကလေးဘဝထဲကနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အပြည့်အဝ spectrum ကိုဖြတ်ပြီးဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များဆနျးစစျဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုတစ်ခုမှာသွပ်ရည်စိမ်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကပြီးစီးခဲ့သည်66 အတွက် 29 တစ်နှစ်ကြားရှိရန်။ သူတို့ဟာ ventral striatal activation ငွေကြေးဆုလာဘ်၏ကွဲပြားပြင်းအားမှအထိခိုက်မခံခဲ့ကြောင်းပြသ 49 နှင့်ဤတုံ့ပြန်မှုကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်မှဆွေမျိုး, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပုံကြီးချဲ့ခဲ့ကြောင်း6(ကြည့်ရှု ပုံ 3), signal ကိုတိုး၏ညွှန်ပြ6သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရေရှည်တည်တံ့ activation 83။ အဆိုပါ ventral striatum, Orbital prefrontal ဒေသများအတွက်ပုံစံမတူဘဲ, (ဤအသက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖှံ့ဖွိုးတိုးတပြသပုံ 2b).
ဆုချခြင်းနှင့် risk- ဆည်းပူးနေနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့မှ Ventral Striatal လှုပ်ရှားမှု။ ကနေအဆင်ပြေအောင် axial လေယာဉ်အတွက် ventral striatum ၏ Localization (panel ကို left), ဆုလာဘ် (အလယ်တန်း panel က) နဲ့ activated နှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ (ညာ panel က) နဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းသော ( 6, 16)
ဒါပေမယ့်ဘယ်လို ventral striatum အတွက်အချက်ပြ၏ဤတိုးမြှင့်အပြုအမူဆက်စပ်သလဲ, တစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု, သွပ်ရည်စိမ်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအတွက် 16 အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့် Impulse ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုအတိုင်းအတာနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ငွေကြေးဆုလာဘ်ပေးရန် ventral striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အန္တရာယ်များအပြုအမူ, အန္တရာယ်အမြင်နှင့် Impulse ၏အမည်မသိ Self-အစီရင်ခံစာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြေးခွံ7တစ်နှစ်ကြားရှိမှ 29 သူမ၏နမူနာများတွင်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ သွပ်ရည်စိမ် et al ။ ကြီးမားသောဆုလာဘ်များနှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ပါဝငျများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှ ventral striatal လှုပ်ရှားမှုအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့ပြသ (ကြည့်ရှု ပုံ 3) ဤတွေ့ရှိချက်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုနှင့်အတူ ventral striatal လှုပ်ရှားမှုဖေါ်ပြခြင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းများမှာ 84, 85.
ဆယ်ကျော်သက်များ၏အန္တရာယ်များသောအပြုအမူနှင့်အပြုသဘောဆောင်သော ventral ကိုယ်ဝန်တုန့်ပြန်မှုကြောင့်ရည်ညွှန်းထားသည့်အတိုင်းဆုချီးမြှင့်ရန်အတွက်ထိခိုက်လွယ်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကို Van Leijenhorst နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှထပ်မံပံ့ပိုးရန် 18 တစ်လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်သုံးပြီးဒီအသင်းအဖွဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အဆိုပါတာဝန်အနိမျ့-အန္တရာယ်ပိုကြီးတဲ့ငွေကြေးဆုလာဘ်ရယူတဲ့သေးငယ်ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့အသေးစားငွေကြေးဆုလာဘ်များနှင့် Hight-အန္တရာယ်လောင်းကစားဝိုင်းရယူ၏မြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူလောင်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါ fMRI ရလဒ်များကိုအနိမျ့-အန္တရာယ်ရွေးချယ်မှု ventral medial prefrontal cortex အတွက် activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသော်လည်းမြင့်အန္တရာယ်ရွေးချယ်မှု ventral striatal စုဆောင်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အန္တရာယ်များအပြုအမူ subcortical ဆုလာဘ်များနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ neurobiological မော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီ prefrontal စည်းမျဉ်းဦးနှောက်ဒေသများ၏ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တစ်ခုအချိုးမညီမျှမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်သောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါသွပ်ရည်စိမ်လေ့လာမှုအတွက်အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူနှင့် ventral striatal activation အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ရှိပုံပေါ်ပေမယ့် 16 အဘယ်သူမျှမဆက်စပ် Impulse နှင့်အတူ ventral striatal လှုပ်ရှားမှုအကြားသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအစား Impulse ratings ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်း prefrontal cortical စုဆောင်းမှုအတွက်အသက်အရွယ်နှင့်အတူ linear ဖှံ့ဖွိုးတိုးဖေါ်ပြခြင်းမြောက်မြားစွာပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း, အသက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည် 7, 75, 77 (ကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုတွေ့မြင် 34, 86) ။ ထို့အပြင်လတ်တလောလေ့လာမှုများ Impulse ratings ပြောင်းပြန်ကျန်းမာယောက်ျားလေးများ (7-17yrs) ၏နမူနာအတွက် ventral medial prefrontal cortex ၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူပတျသကျကြောင်းပြသကြ 87။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်တွေ့လူဦးရေ၏လေ့လာမှုများထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ prefrontal ဒေသများတွင်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်လျှော့လှုပ်ရှားမှုချို့ယွင်း ADHD, ရှိုးများကဲ့သို့ Impulse ပြဿနာများအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ, 88, 89 ဒါပေမယ့်မက်လုံးမှမြင့်တုံ့ပြန်မှုမပြဘူး 90.
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်ဆက်စပ်သောဆောက်လုပ်ရေးတစ် dissociation များအတွက် neurobiological ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုပေးနှင့် (ကိုတွေ့မြင်ဟောင်းတစ်ဦး curvilinear ပုံစံနှင့်အဆုံးစွန်သောတစ်ဦး linear ပုံစံဖေါ်ပြခြင်းနဲ့အတူ Impulse ၏ထံမှ sensitivity ကိုဆုချ ပုံ2B ကို) ။ ထို့ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ရွေးချယ်မှုနှင့်အပြုအမူ Impulse သို့မဟုတ်တစ်ယောက်တည်း prefrontal cortex ၏ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာဖှံ့ဖွိုးတိုးခြင်းဖြင့်ရှင်းပြခဲ့မရနိုင်ပါ။ ယင်းအစားစိတ်ခွန်အားနိုး subcortical ဒေသများဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူသာလူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားသော်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာကလေးများအနေဖြင့်အဘယ်ကြောင့် elucidate ဖို့စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ventral striatum စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အဆင့်ဆင့်အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပေါ်လာသော 82, 91 နှင့်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေ 15 အာရုံခံစားမှု-ရှာခြင်းနှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေဘို့ဆုလာဘ်အဖြစ်အဆိုပါ propensity လက်ခံရရှိသည့်အခါ 16, 91။ ပို. အရေးကြီးသည်ဤတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲ Impulse အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အပြောင်းအလဲများကိုဖို့ထက်အန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပေးထားသောတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဓာတ်အတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစသောအပြောင်းအလဲကြောင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒီထက်အာရုံကိုလက်ခံရရှိကြောင်းတစ်သိပ္ပံနည်းကျဧရိယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သင်တန်းကျော်အပြန်အလှန်ဘယ်လိုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များကိုအဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းက, Ernst နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း 35, 36 တစ်ငွေကြေးဆုလာဘ်ဂတိကပိုလူကြီးများသည်ထက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအပြုအမူ facilitated ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ Geier et al ။ 17 မကြာသေးမီကအလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်စဉ်အတွင်းတစ် antisaccade တာဝန်တစ်ခုမူကွဲသုံးပြီးဒီသိမြင်မှုဖွင့်-စည်းမျဉ်းများ၏အာရုံကြောအလွှာဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအတွက်, ပိုက်ဆံရှယ်ယာမှာထားတဲ့အဘို့အစမ်းသပ်မှုတွေစွမ်းဆောင်မှုနှင့် facilitated တိကျမှန်ကန်မှု speeded, ဒါပေမယ့်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုမြီးကောင်ပေါက်များတွင်ပိုမိုကြီးမားခဲ့သည်။ အဘို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် antisaccade ကွပ်မျက်နေစဉ်နောက်တစ်နေ့ရုံးတင်စစ်ဆေးအကျိုးကိုခံရလိမ့်မယ်လို့တစ် cue ပြီးနောက်မြီးကောင်ပေါက်အဆိုပါ ventral striatum အတွက်ပုံကြီးချဲ့ activation ပြသခဲ့သည်။ တစ်ခုကပုံကြီးချဲ့တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာအကျိုးကို-related တက်-စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်ဒေသများတွင်အကြံပြုခြင်း, မျက်စိလှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်ဘို့အရေးကြီးသည်မှာအဆိုပါ precentral sulcus တလျှောက် prefrontal ဒေသများအတွင်းဆယ်ကျော်သက်များတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။
ဆုလာဘ်များ, အထက်အကြံပြုအဖြစ်မြှင့်တင်ရန်အဖြစ်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူလျော့နိုင်ပါတယ်။ အစာစားချင်စိတ်တွေကိုလောင်းကစားဝိုင်းတာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းပျက်ကွက်နှိုင်းယှဉ်ပစ္စုပ္ပန်အခါမြီးကောင်ပေါက်ကပိုအန္တရာယ်များကိုယူသောလေ့လာရေးဒီအမှတ် (ဥပမာစေသည် 37) ။ မကြာသေးခင်ကပုံရိပ်လေ့လာမှုမှာ 20, Somerville et al ။ အစာစားချင်စိတ်တွေကိုနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုဒေသများချ-စည်းမျဉ်းများ၏အာရုံကြောအလွှာဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ Somerville et al ။ သူတို့တစ်တွေအစာစားချင်စိတ်လူမှုရေးတွေကို (ပျော်ရွှင်မျက်နှာများ) နှင့်ကြားနေတွေကိုနှင့်အတူ nogo တာဝန် go ဖျော်ဖြေနေစဉ်ကလေးဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်တန်းသားများကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ကြားနေတွေကိုမှ Task ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ကဒီချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တာဝန်အပေါ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတည်ငြိမ်တိုးတက်မှုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်တစ်ဦးချင်းစီအစာစားချင်စိတ်တွေကိုချဉ်းကပ်ခုခံတွန်းလှန်ခဲ့သည့်အဘို့အစမ်းသပ်မှုတွေပေါ်မြီးကောင်ပေါက်အဆိုပါမျှော်လင့်ထားသည့်အသက်အရွယ်-မှီခိုတိုးတက်မှုများကိုပြသရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဤသည်စွမ်းဆောင်ရည်လျှော့သည့် striatum အတွက်ပိုကောင်းလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့် paralleled ခဲ့သည်။ ပြောင်းပြန်ဟာယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus အတွက် activation ခြုံငုံတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နှင့် nogo နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အသက်အရွယ်နှင့်အတူပြောင်းလဲမှုတစ်ခု linear ပုံစံစမ်းသပ်မှုတွေကိုသွားပြသခဲ့သည်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီတွေ့ရှိချက်ဟာရင့်ကျက်မှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းချုပ်တုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်းအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အစာစားချင်စိတ်တွေကိုပုံကြီးချဲ့ ventral striatal ကိုယ်စားပြုမှု ဆက်စပ်. အ။
စုပေါင်းအဲဒီဒေတာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်အန္တရာယ်-takers ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်ဟုအကြံပြု 41အချို့သောဆယ်ကျော်သက်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအဘို့အလားအလာ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုချပြီး, အခြားသူများအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထက်ပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူဦးရေအတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့် Impulse နှင့်ဆက်စပ်သောရှုပ်ထွေးသောဦးနှောက်-အပြုအမူဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲစဉ်းစား၏အရေးပါမှုကို underscore ။ နောက်ထပ်အဲဒီတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောစွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေနှင့်နောက်ဆုံးတွင်, စွဲလမ်းတချို့တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အားနည်းချက်ရှင်းပြဖို့အကူအညီဖြစ်စေနိုင် 64.
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အတူတိုးမြှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုကာလခြေတစ်လှမ်း 92, အရက်ဆယ်ကျော်သက်များကတရားမဝင်တ္ထုများအများဆုံးနှိပ်စက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ 11, 93, 94။ ထိုကဲ့သို့သောအရက်အဖြစ်ထိုအရာဝတ္ထုများ၏အစောပိုင်းအသုံးပြုမှု, အကြာတွင်မှီခိုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောခန့်မှန်းဖြစ်ပါသည် 95။ အခြားမည်သည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဇာတ်စင်မှာ unequaled ကြောင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြားအရက်သေစာမှီခိုအတွက်တစ်ဟုန်ထိုးပေးထား 96ကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုဒီမှာကို select လုပ်ပါပြန်လည်သုံးသပ်အပေါ်အများစုအာရုံစိုက်။
ကိုကင်းနှင့်အ cannabinoids အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုအရက်အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားပစ္စည်းများ, ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့်ခဲ့ကြပြပြီ။ ဤရွေ့ကားတ္ထုများဟာ ventral striatum အပါအဝင် dopamine ကြွယ်ဝ frontolimbic circuitry အတွက်အာရုံခံ၏စူးရှသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ mesolimbic dopamine ဂီယာကိုသြဇာလွှမ်းမိုး 97-99။ Hardin နှင့် Ernst (2009) ကအကြံပြုထားသကဲ့သို့ 92ဤတ္ထုများ၏အသုံးပြုမှုကိုမြင့်ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးမှအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများ၏အားကောင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့တစ်ခုပြီးသားတိုးမြှင် ventral striatum တုံ့ပြန်မှုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ Robinson နဲ့ Berridge 61, 63, 100 အလွဲသုံးစားမှုဤမူးယစ်ဆေးဝါးများ, အရှင် prefrontal ထိန်းချုပ်မှုဒေသများထိပ်တန်းဆင်းထိန်းညှိနှိမ့်ချခြင်း, ventral striatum တူသောမူးယစ်ဆေးမက်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စနစ်များ "hijack" နိုငျကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြသည်။
အရက်၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအသုံးပြုမှုအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလအလုပ်၏အများစုလူ့မြီးကောင်ပေါက်ထိုသို့သောလေ့လာမှုများဖျော်ဖြေအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ပေးထား, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၌ပြစ်မှားမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အီသနော၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များလည်းအရွယ်ရောက်မှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာအရက်၏ differential ကိုသက်ရောက်မှုများအတွက်အများဆုံးသက်သေအထောက်အထားများကိုအီသနောသက်ရောက်မှုမှဆွေမျိုးအာရုံမခံစားနိုင်သောရှိခြင်းမြီးကောင်ပေါက်များ၏လူ့တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ လှံတော်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကလူကြီးများမှဆွေမျိုးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်, လူမှုရေး, မော်တာ, သက်သာခြင်းစူးရှသောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အီသနော၏ "ရက်နာသက်ရောက်မှု" ကိုလျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းပြသကြ 101-103။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သည်ဤသက်ရောက်မှုများများစွာအတွက်သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ကြသည်တွေကိုလူကြီးများအတွက်စားသုံးမှုကန့်သတ်ရန်အဖြစ်အစေခံ 11။ အလားတူပင်မြီးကောင်ပေါက်ကသူတို့အရက်စားသုံးမှုကန့်သတ်နိုင်ရန်ကူညီစေခြင်းငှါတွေကိုမှအာရုံမခံစားနိုင်သောအခါတစ်ချိန်တည်းမှာ, ထိုကဲ့သို့သောလူမှုရေးပံ့ပိုးအဖြစ်အရက်၏အပြုသဘောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုထပ်မံအရက်သေစာအသုံးပြုမှုကိုအားပေးစေခြင်းငှါ 104။ လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်ပေါ်ပေါက် abuse- အရက်အပါအဝင် humans- အတွက်အများစုမှာအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေ 23ဒီအပြုအမူဟာသူတို့ရဲ့ရွယ်တူတန်ဖိုးထားသောအခါအလားအလာအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးပိုမိုသုံးစွဲခြင်းဆီသို့ဦးတည်မြီးကောင်ပေါက်တွန်းအားပေး။
ဘယ်လိုဦးနှောက်လူကြီးများမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆွေမျိုးထဲမှာအရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူပြောင်းလဲသလဲ? မြီးကောင်ပေါက်အရက်၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုအချို့မှလျော့နည်းထိခိုက်မခံစေခြင်းငှါသွားရမည်အကြောင်း, သူတို့ neurotoxic သက်ရောက်မှုအချို့ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံဖြစ်ပေါ်လာ 94။ ဥပမာအားဖြင့်, ဇီဝကမ္မလေ့လာမှုများ (ဥပမာ, 105) လူကြီးများထက် NMDA-mediated Synaptic အလားအလာများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် hippocampal ချပ်အတွက်ရေရှည်အလားအလာပိုမိုအီသနောသွေးဆောင်တားစီးပြပါ။ အီသနော၏ intoxicating အညွှန်းများကိုထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့မှုလည်း သာ. ကြီးမြတ် hippocampal မှီခိုမှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှုကိုထုတ်လုပ် 106, 107 နှင့်တာရှညျအီသနောထိတွေ့မှုပိုမို dendritic ကျောရိုးအရွယ်အစားနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် 108။ dendritic ကျောရိုးအပြောင်းအလဲများကိုဤအဆုံးစွန်သောတွေ့ရှိချက်များကိုစွဲလမ်းအပြုအမူတည်ငြိမ်စေခြင်းငှါဦးနှောက် circuitry ၏ပြုပြင်မွမ်းမံရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များဖြစ်ကြသည် 94.
ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများကဦးနှောက်အပေါ်အရက်၏ neurotoxic သက်ရောက်မှု၏လူသားတွေအတွက်အပြိုင်သက်သေအထောက်အထားသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရေအတွက်ကကျန်းကျန်းမာမာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရက်-မှီခိုမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများသို့မဟုတ် -abusing အတွက်ပြောင်းလဲဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကသေးငယ်တိုကျရိုကျနှင့် hippocampal volumes ကို, ပြောင်းလဲအဖြူကိစ္စ microstructure နှင့်ဆင်းရဲတဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုပြသ 109-113။ ထို့အပြင်ဤလေ့လာမှုများ hippocampal volumes ကိုများနှင့်ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုအသက်အရွယ်အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့များကိုပြသ 109 ကြောင်းအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြံပြုခြင်းအရက်ရဲ့ neurotoxic သက်ရောက်မှုမှမြင့်အန္တရာယ်တစ်ခုကာလဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုး hippocampal အသံအတိုးအကျယ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည့် Duration:, ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုမားစေလိမ့်မည်။
လောလောဆယ်သာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်နှင့်ဆက်နွယ်လှုံ့ဆော်မှုမှ (အရက်၏ဆိုလိုသည်မှာဓာတ်ပုံများကို) အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုဆန်းစစ်ကြပါပြီ 114ဒီအနာဂတ်သုတေသနတစ်ခုဧရိယာဖြစ်သော်လည်း, (ကြည့်ရှု 115) ။ High-အန္တရာယ်လူဦးရေလေ့လာရေး (အရက်မှီခို၏ဥပမာမိသားစုဝန်) တိုကျရိုကျလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ချို့ယွင်းအကြံပြုကြိုတင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထိတွေ့ခြင်းမှသိသာများမှာ (ဥပမာ 116, 117) နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် 118, 119။ အနိမ့်နှင့်မြင့်မားသောမိသားစုအန္တရာယ်၏သို့သော် 8 မှတစ်နှစ် 15 အတွက်အရက်၏ဆိုးကျိုးများ၏အစောပိုင်းအပြုအမူလေ့လာမှုအဟောင်းယောက်ျားလေးများ 120, အထင်ရှားဆုံးတွေ့ရှိချက်နည်းနည်းလူဦးရေကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြကာအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်မူးယစ်ခဲ့သည့်ပေးသောဆေးများပြီးနောက်မူးယစ် -even ၏စမ်းသပ်မှုအပေါ်မည်သည့်အမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်ပြဿနာလျှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အတူတူပင်ကြိုတင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထိတွေ့ခြင်းမှဆင်းရဲတဲ့ထိပ်တန်း၏တိုးမြှင့အရက်၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုများနှင့်သက်သေအထောက်အထားကိုဆင်း prefrontal ထိန်းချုပ်မှုသိသာနှင့်အတူဤရွေ့ကား neurotoxic ဆိုးကျိုးများ 116 ကောင်းစွာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကျော်လွန်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ရေရှည်သင်တန်းဖွင့်လှစ်စေခြင်းငှါ 118, 119.
စိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုမှပုံကြီးချဲ့ reactivity ကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင် "ထိပ်ဆုံး-Down" သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဒေသများဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းကြောင့်အစောပိုင်းထွန်းသစ်စ "အောက်ခြေ-up 'စနစ်များအကြားတင်းမာမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအဖြစ်အတူတူ, ထိုလေ့လာမှုများထောက်ခံမှုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အမြင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ sensation- ရှာခြင်းနှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်နှင့်ဆက်နွယ်သောဤ Bottom-Up စနစ်ကတဖြည်းဖြည်း, "အထက်မှအောက်သို့" စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (ဥပမာများ၏တိုးတက်သောပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အတူ၎င်း၏ယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်းရှုံး 2, 7, 15, 23, 64, 121-123) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထိုအဖွံ့ဖြိုးဆဲစနစ်များအကြားဒါဟာမညီမမျှအန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူတွေမှကြီးထွားအားနည်းချက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများရဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုကြီးထွားသည်ဤ subcortico-cortico စနစ်များ dissociating အဘို့, အမူအကျင့်လက်တွေ့နှင့် neurobiological သက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ ကလေးများ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများမှအုပ်ချုပ်ခွင့် ratings -report ဓာတ်ခွဲခန်းတာဝန်များကိုနှင့်ကိုယ်ပိုင် (ဥပမာအနေဖြင့်အပြုအမူဒေတာ 18, 20, 37, 42Impulse ကလေးဘဝထဲကနေငယ်ရွယ်လူကြီးတစ်ဦး linear ဖက်ရှင်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖြတ်ပြီးလျော့ကျစဉ်), အကြမ်းဖျင်း 13 နှင့် 17 နှစ်အကြားတစ်ဦးအထွတ်အထိပ်တစ်ခုနဲ့ပက်ပင်းနှင့်အတူအာရုံ-ရှာကြံ၏ curvilinear ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြံပြုအပ်ပါသည်။ လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအမူအကျင့် data တွေကို Parallel ကြောင်း (ventral striatum) ဆုချမှအထိခိုက်မခံ subcortical ဦးနှောက်ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများကိုပြသပါ။ အထူးသ, သူတို့ကဤဒေသများတွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးတစ် curvilinear ပုံစံကိုပြသနှင့်၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှုများ၏ပြင်းအားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, prefrontal ဒေသများ, အပြုအမူထိပ်ချစည်းမျဉ်းအတွက်အရေးကြီးသော, Impulse ၏အမူအကျင့်လေ့လာမှုများတွင်တွေ့မြင်သူတွေကိုမှုနဲ့အပြိုင်ကြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦး linear ပုံစံကိုပြသ။ ထို့အပွငျချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပြဿနာများနှင့်အတူလက်တွေ့မမှန်ထပ်မံ Impulse ၏ phenotypic ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူ neurobiological အလွှာဟာချိတ်ဆက်, လျော့နည်း prefrontal လှုပ်ရှားမှုပြသပါ။
ဒီကာလအတွင်း cortical ဒေသများ prefrontal မှဆွေမျိုး subcortical ဒေသများအကြားတင်းမာမှုအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်စောင့်ကြည့်လေ့လာမြင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ, တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ယန္တရားအဖြစ်အစေခံစေနိုင်သည်။ မြီးကောင်ပေါက်များ၏အများစုအရက်ကြိုးစားခဲ့ကြ 93သို့သော်ဤသေချာပေါက်အလွဲသုံးစားမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပေးပါဘူး။ တိုကျရိုကျလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ချို့ယွင်းဖေါ်ပြခြင်းက high-အန္တရာယ်လူဦးရေ၏လေ့လာမှုများအားဖြင့်အကြံပြုအဖြစ်လျော့နည်းအထက်မှအောက်သို့စည်းမျဉ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့ရန်ကြိုတင်အရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမှအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ပါသည် (ဥပမာ 116, 117) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ neurobiological မော်ဒယ်များ၏အခြေအနေတွင်ဤလူတစ်ဦးချင်းစီ cortico-subcortical ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုပင် သာ. ကြီးမြတ်မညီမမျှရှိလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်လျှော့ချ prefrontal လှုပ်ရှားမှုပြကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လေးကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိနေသော ADHD လူဦးရေအတွက်လက်တွေ့တွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီလည်းရှိပါတယ် 124။ cortico-subcortical ထိန်းချုပ်မှု၌ဤမညီမမျှနောက်ထပ်မဟုတ်ရင်စားသုံးမှုကန့်သတ်နိုင်ရန်ကူညီစေခြင်းငှါ၎င်းမော်တာများနှင့်အရက်၏သက်သာစေသောဆေးသက်ရောက်မှုမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အာရုံမခံစားနိုင်သောအားဖြင့်ပိုဆိုးနှင့်နောက်ထပ်အရက်အသုံးပြုမှုကိုအားပေးစေခြင်းငှါအရာလူမှုရေးပံ့ပိုးအတွက်အရက်၏အပြုသဘောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခံရမယ်လို့ 104။ Steinberg နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကပြထားတဲ့အတိုင်း 23, 41လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်ပေါ်ပေါက် abuse- အရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများအပါအဝင်အများစုမှာအန္တရာယ်များ behaviors- ။ ဒီအပြုအမူတန်ဖိုးထားသောအခါထို့ကြောင့်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းရွယ်တူများကအားပေးအားမြှောက်နဲ့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။
စွဲလမ်းနှင့်ပတ်သက်သောအလုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုများတစ်ခုမှာပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ကြားဝင် / ကုသမှုများအတွက်ရလဒ်များအကဲဖြတ်များအတွက်အန္တရာယ်များ၏အစောပိုင်းဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက် biobehavioral အမှတ်အသားများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်သွေးဆောင်အစာစားချင်စိတ်တွေကိုရှေ့မှောက်တွင်နှစ်ဦးစလုံးသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလိုအပ်ကြောင်းအမူအကျင့်စိန်ခေါ်မှုများအသုံးဝင်သောအလားအလာအမှတ်အသားများဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူ assay ၏သာဓကမြင့်အနိမ့်အန္တရာယ်သို့မဟုတ် "ပူ" နှင့်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့ "အအေး" အခြေအနေများနှင့်အတူလောင်းကစားဝိုင်းတာဝန်များကိုပါဝင်သည် 18, 37 တစ်ဦးအစာစားချင်စိတ် / သွေးဆောင် cue ဖို့တုန့်ပြန်နှိပ်ကွပ်လိုအပ်ကြောင်းသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တာဝန်များကို 20။ ဤရွေ့ကားတာဝန်များကို Mischel အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဆန္ဒပြည့်တာဝန်များ၏နှောင့်နှေး၏ဆင်တူများမှာ 125။ တကယ်တော့အဲဒီလိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများတွင်ဤကဲ့သို့သောရိုးရှင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တာဝန်များကိုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ဆန္ဒပြည့်တာဝန်များ၏နှောင့်နှေးအပေါ်ထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကအဖြစ်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် 28, 29။ Mischel နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များတည်ငြိမ်မှုနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဘဝ၌ဤတာဝန်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တန်ဖိုးကို၏အဆင့်မြင့်ပြသခဲ့ကြသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမှသက်ဆိုင်ရာသူတို့တစ်တွေကလေးငယ်အဖြစ်ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးနိုင်စွမ်း, နောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌လျော့နည်းပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု (ဥပမာ, ကိုကင်း) ခန့်မှန်းကြောင်းပြသ 126။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအလုပ်အတွက်ကျနော်တို့နောက်ထပ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်အလားအလာအန္တရာယ်အချက်များနားလည်ရန်ဤနိုင်စွမ်း၏အာရုံကြောအလွှာခွဲခြားသတ်မှတ်ဤတာဝန်များကိုပေါင်းစပ်သုံးစွဲဖို့စတင်နေကြသည်။
စုပေါင်းအဲဒီဒေတာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက် risk- takers ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်ဟုအကြံပြု 41အချို့သောဆယ်ကျော်သက်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအဘို့အလားအလာ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုချပြီး, အခြားသူများအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထက်ပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေညာဘက်ကို enviroments မှာအတော်လေးသပ္ပါယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီတော့ထက်ယနေ့အထိအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမမူကြောင်းကိုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူပပျောက်ဖို့ကြိုးစားနေ 23တစ်ဦးထက်ပိုသောအပြုသဘောဆောင်တဲ့မဟာဗျူဟာထိန်းချုပ်ထား settings ကိုများနှင့်ကန့်သတ်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအခွင့်အလမ်းတွေအောက်မှာ (In-တံခါးကိုမြို့ရိုးကိုတောင်တက်နှင့်အတူကျောင်းကိုအစီအစဉ်များအပြီးတွင်ဥပမာ) အန္တရာယ်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ကဤဘေးကင်းလုံခြုံအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူအတွေ့အကြုံများတဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှု, သည်အတိုင်း, ဆယ်ကျော်သက်ဒီ circuitry ၏ရင့်ကျက်နှင့်အတူဒဏ်ငွေ tuning နေဖြင့်အထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုဒေသများနှင့် Bottom-Up drives တွေကိုအကြားဆက်သွယ်မှုများကိုရေရှည်အပြုအမူပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ အခွားသောအောင်မြင်သောမဟာဗျူဟာအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေကိုလျှော့ချရန်, ငြင်းဆန်ကျွမ်းကျင်မှု, ဒါမှမဟုတ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအပေါ်အာရုံစိုက်ထားတဲ့မှတ်ဉာဏ်အပြုအမူကုထုံးများမှာ 127။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူဦးရေအတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့် Impulse နှင့်ဆက်စပ်သောရှုပ်ထွေးသောဦးနှောက်-အပြုအမူဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲစဉ်းစား၏အရေးပါမှုကို underscore ။ နောက်ထပ်အဲဒီတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်, စွဲ-ဆည်းပူးနေအန္တာရာယ်မှအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အားနည်းချက်ရှင်းပြကူညီလိမ့်မည်။
ဤလုပ်ငန်းကို NIDA R01 DA018879, NIDA Pre-ပါရဂူလေ့ကျင့်ရေးထောက်ပံ့ငွေ DA007274, အ Mortimer ဃ Sackler မိသားစု, Dewitt-Wallace ရန်ပုံငွေအသုံးပြုပုံနှင့် Weill အတှကျကော်နဲလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ် Citigroup ဇီဝဆေးပညာ Imaging ကရေးစင်တာနှင့် Imaging က Core နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်။
1. Blakemore SJ ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လူမှုရေးဦးနှောက်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ Reviews ။ 2008;9: 267-277 ။
2. ကာဇီ BJ, Getz S ကိုသွပ်ရည်စိမ်အေအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ dev ဗျာ 2008;28(1): 62-77 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3. ကာဇီ BJ, ဂျုံးစ် RM, Hare က TA ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2008 မတ်လ;1124: 111-126 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4. Sowell ER, Peterson BS, Thompson ကလေး, SE, Henkenius AL, Toga AW မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ လူ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် cortical ပြောင်းလဲမှုပုံဖော်။ နတ် neuroscience ။ 2003 မတ်လ;6(3): 309-315 ။ [PubMed]
5. Gogtay N ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Lusk L ကို, et al ။ အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ dynamic မြေပုံ။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2004;101(21): 8174-8179 ။
6. သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Parra အီး, et al ။ orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006 ဇွန် 21;26(25): 6885-6892 ။ [PubMed]
7. ယုန်က TA, စပါး N ကို, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Voss Hu, ဂလိုဗာ GH, Casey BJ ။ တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းသွားလာရင်း-nogo တာဝန်စဉ်အတွင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စိတ်ခံစားမှု reactivity ကိုများနှင့်စည်းမျဉ်း၏ဇီဝအလွှာဟာ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008 မေလ 15;63(10): 927-934 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8. Bourgeois JP, Goldman-Rakic ​​PS, Rakic ​​P. Synaptogenesis မျောက်တွေကို၏ prefrontal cortex ၌တည်၏။ ဦးနှောက် Cortex ။ 1994;4: 78-96 ။ [PubMed]
9. Huttenlocher PR စနစ်။ လူ့တိုကျရိုကျ cortex အတွက် Synaptic သိပ်သည်းဆ - ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်အိုမင်း၏သက်ရောက်မှုများ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1979;163: 195-205 ။ [PubMed]
10 ။ Rakic ​​ပဲ။ အဆိုပါနှောက် cortex ၏ Synaptic ဖှံ့ဖွိုးတိုး: သင်ယူမှု, memory နဲ့စိတ်ရောဂါများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 1994;102: 227-243 ။ [PubMed]
11 ။ Windle M က, လှံ LP သို့ Fuligni AJ, et al ။ အသက် 10 နှင့် 15 နှစ်အကြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ယန္တရားများ: အသက်မပြည့်သေးခြင်းနှင့်ပြဿနာအရက်သောက်သို့အသွင်ကူးပြောင်းမှု။ ကလေးအထူးကု။ 2008;121: S273-S289 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Eaton LK, Kann L, Kinchen S, et al ။ လူငယ်အန္တရာယ်အပြုအမူစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း - ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ ၂၀၀၇၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအကျဉ်းချုပ်။ ရောဂါနှင့်သေဆုံးမှုအပတ်စဉ်အစီရင်ခံစာ။ 2008;57(SS04): 1-131 ။ [PubMed]
13 ။ Laviola, G, Adriani W က, Terranova ML, လူ့ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များအတွက် psychostimulants မှအားနည်းချက်များအတွက် Gerra G. အ Psychobiological အန္တရာယ်အချက်များ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1999 နိုဝင်ဘာ;23(7): 993-1010 ။ [PubMed]
14 ။ လှံကို LP ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2000;24(4): 417-463 ။ [PubMed]
15 ။ Ernst M က, နယ်လ်ဆင် EE, Jazbec S က, et al ။ လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens ။ Neuroimage ။ 2005 မေလ 1;25(4): 1279-1291 ။ [PubMed]
16 ။ သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare T က, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်: အန္တရာယ်မှာဘယျသူနညျး Dev မှသိပ္ပံ။ 2007 မတ်လ;10(2): F8-F14 ။ [PubMed]
17 ။ Geier CF, Terwilliger R ကို, Teslovich T က, Velanova K သည်, Luna ခနုဆုကြေးထုတ်ယူခြင်းနဲ့ဆယ်ကျော်သက်အတွက် Inhibitory ထိန်းချုပ်ရေးအပေါ်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်။ Cereb Cortex ။ 2009 အောက်တိုဘာ 29;
18 ။ ဗန် Leijenhorst L ကို, Moore BG, ကအေဲနျဂြီက de Mack ZA, Rombouts လုပ် SA, Westenberg pm တွင်, Crone EA ၏။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချ: ဆုလာဘ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဒေသ Neurocognitive ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Neuroimage ။ 2010 ဖေဖော်ဝါရီ 24;
19 ။ ဗန် Leijenhorst L ကို, Zanolie K ကိုဗန် Meel CS, Westenberg pm တွင်, Rombouts လုပ် SA, Crone EA ၏။ အဘယ်အရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလှုံ့ဆျော? မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဆုလာဘ် sensitivity ကိုဖြန်ဖြေဦးနှောက်ဒေသများ။ Cereb Cortex ။ 2010 ဇန်နဝါရီ;20(1): 61-69 ။ [PubMed]
20 ။ Somerville LH, Hare က TA, Casey BJ ။ Frontostriatal ရငျ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်တွေကို appetitive မှအမူအကျင့်စည်းမျဉ်းဆုံးရှုံးမှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
21 ။ Ernst M က, ထင်းရူး DS, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူများ၏ neurobiology ၏ Hardin အမ် Triadic မော်ဒယ်။ Psychol Med ။ 2006 မတ်လ;36(3): 299-312 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ Ernst M က, Romeo RD, Andersen က SL ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Neurobiology: တစ်အာရုံကြောစနစ်များမော်ဒယ်သို့ပြတင်းပေါက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009 စက်တင်ဘာ;93(3): 199-211 ။ [PubMed]
23 ။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပေါ် Steinberg L. တစ်ဦးကလူမှုရေးမှ neuroscience ရှုထောင့်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2008;28: 78-106 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ Geier ကို C, Luna ခမက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏ရငျ့။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009 စက်တင်ဘာ;93(3): 212-221 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ ယုန်က TA, စပါး N ကို, Davidson MC, ဂလိုဗာ GH, Casey BJ ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းထဲမှာ amygdala နှင့် striatal လှုပ်ရှားမှုပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005 မတ်လ 15;57(6): 624-632 ။ [PubMed]
26 ။ Levita L ကို, Hare က TA, Voss Hu, ဂလိုဗာ, G, ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံး DJ သမား, Casey BJ ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏ bivalent ခြမ်း။ Neuroimage ။ 2009 ဖေဖော်ဝါရီ 1;44(3): 1178-1187 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27 ။ Steinberg L, ဂရေဟမ် S, O'Brien L, Woolard J, Cauffman အီး, Banich အမ်အနာဂတ်တိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်လျှော့စျေးလျှော့အတွက်နှောင့်နှေး? ကလေးသူငယ် Dev မှ။ 2009 ဇန်နဝါရီ-ဖေဖော်ဝါရီ;80(1): 28-44 ။ [PubMed]
28 ။ Mischel W က, Shoda Y ကို, Rodriguez MI ။ ကလေးများအတွက်ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေး။ သိပ္ပံ။ 1989 မေလ 26;244(4907): 933-938 ။ [PubMed]
29 ။ Eigsti ထားတဲ့ IM, Zayas V ကို, Mischel W က, et al ။ နှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးမှမူကြိုကနေသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးခန့်မှန်း။ Psychol သိပ္ပံ။ 2006 ဇွန်;17(6): 478-484 ။ [PubMed]
30 ။ Barratt အီး, Patton ဂျေ Impulse: သိမြင်မှု, အမူအကျင့်များနှင့် psychophysiological Correlate ။ ခုနှစ်တွင်: Zuckerman က M, အယ်ဒီတာ။ အာရုံခံစားမှုရှာ, Impulse နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ဇီဝခြေစွပ်။ NJ: Erlbaum, Hillsdale; 1983 ။ စစ။ 77-122 ။
31 ။ Evenden JL ။ Impulse ၏အမျိုးပေါင်း။ Psychopharmacology (Berl) 1999 အောက်တိုဘာ;146(4): 348-361 ။ [PubMed]
32 ။ ကာဇီခ Frontostriatal နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအခြေခံ frontocerebellar circuitry ။ ခုနှစ်တွင်: Mayr ဦး, Owh အီး, Keel SW, အယ်ဒီတာများ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာတစ်ဦးချင်းစီဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံး; 2005 ။
33 ။ Davidson MC, Amso: D, Anderson က LC,4ကနေသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏စိန်အေဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ 13 နှစ်: မှတ်ဉာဏ်, တားစီးနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန် switching ၏ထိန်းသိမ်းရေးထံမှသက်သေအထောက်အထား။ Neuropsychologia ။ 2006;44(11): 2037-2078 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ ကာဇီ BJ, စပါး N ကို, Liston ကို C, Durston အက်စ် Imaging ကဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်: ငါတို့သည်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြဘာလဲ? ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2005 မတ်လ;9(3): 104-110 ။ [PubMed]
35 ။ Hardin MG, ကထပ်လောင်း: D, Mueller SC, Dahl RE, ထင်းရူး DS, Ernst အမ် Inhibitory ထိန်းချုပ်မှုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမက်လုံးပေးခြင်းနှင့်ဖွစျပှားထိခိုက်စေလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် modulated ဖြစ်ပါတယ်။ J ကိုကလေး Psychol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009 ဒီဇင်ဘာ;50(12): 1550-1558 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ Jazbec S က, Hardin MG, Schroth အီး, လူယာ, E, ထင်းရူး DS, တစ်ဦး saccade တာဝန်ကဆက်ပြောပါတယ်၏ Ernst အမ်ခေတ်-related သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Exp ဦးနှောက် Res ။ 2006 အောက်တိုဘာ;174(4): 754-762 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
37 ။ Figner B, Mackinlay RJ, Wilkening က F, Weber နဲ့အီးယူ။ အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့် deliberative ဖြစ်စဉ်များ: အကိုလံဘီယာကတ် Task ကိုယူအန္တရာယ်အတွက်အသက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို Exp Psychol Mem ကို Cogn လေ့လာပါ။ 2009 မေလ;35(3): 709-730 ။ [PubMed]
38 ။ Cauffman အီး, et al Shulman EP, Steinberg L ကို။ အဆိုပါအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်ကိုထိခိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ခေတ်ကွဲပြားခြားနားမှု။ dev Psychol ။ 2010 ဇန်နဝါရီ;46(1): 193-207 ။ [PubMed]
39 ။ Crone EA ၏, ဗန် der Molen မဂ္ဂါဝပ်။ စစ်မှန်သောဘဝဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို: ယခင်က ventromedial prefrontal cortex အပေါ်မူတည်မှပြသနေတဲ့လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်။ dev Neuropsychol ။ 2004;25(3): 251-279 ။ [PubMed]
40 ။ Chassin L ကို, Hussong တစ်ဦးက, Barrera M က, Molina B ကို, အနားသတ်ရန် R ကို, Ritter ဂျေဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်း။ ခုနှစ်တွင်: Lerner R ကို, Steinberg L ကို, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်။ ed 2nd ။ နယူးယောက်: Wiley; 2004 ။ စစ။ 665-696 ။
41 ။ စမ်းသပ်လေ့လာမှု: Gardner က M, Steinberg အယ်လ်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, စွန့်စားမှု preference ကိုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအတွက်အောင်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု Peer ။ dev Psychol ။ 2005 ဇူလိုင်;41(4): 625-635 ။ [PubMed]
42 ။ Steinberg L ကိုအဲလ်ဘတ်က D, Cauffman အီး, Banich M က, ဂရေဟမ်က S, Woolard ဂျေခေတ်အပြုအမူနှင့် Self-အစီရင်ခံစာအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်အာရုံရှာခြင်းနှင့် Impulse အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု: တစ် dual-စနစ်များမော်ဒယ်သက်သေအထောက်အထား။ dev Psychol ။ 2008 နိုဝင်ဘာ;44(6): 1764-1778 ။ [PubMed]
43 ။ ကာဇီ BJ, Giedd ဖြစ်မှု, သောမတ်စ် KM ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်း။ Biol Psychol ။ 2000 အောက်တိုဘာ;54(1-3): 241-257 ။ [PubMed]
44 ။ Delgado MR ။ လူ့ striatum အတွက်ဆုလာဘ်-related တုံ့ပြန်မှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2007 မေလ;1104: 70-88 ။ [PubMed]
45 ။ Pasupathy တစ်ဦးက, Miller က ek ။ အဆိုပါ prefrontal cortex နဲ့ striatum အတွက်သင်ယူမှု-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများ။ သဘာဝ။ 2005 ဖေဖော်ဝါရီ 24;433(7028): 873-876 ။ [PubMed]
46 ။ Buckley MJ, Mansouri အက်ဖ်အေ, Hoda H ကို, et al ။ စည်းမျဉ်း-guided အပြုအမူ၏ Dissociable အစိတ်အပိုင်းများကွဲပြား medial နှင့် prefrontal ဒေသများပေါ်မူတည်သည်။ သိပ္ပံ။ 2009 ဇူလိုင် 3;325(5936): 52-58 ။ [PubMed]
47 ။ Cardinal RN, Pennicott DR, Sugathapala CL, Robbins TW, Everitt BJ ။ ယင်းနျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်ကြွက်များတွင်သွေးဆောင် Impulse ရွေးချယ်မှု core ကို accumbens ။ သိပ္ပံ။ 2001 ဇွန် 29;292(5526): 2499-2501 ။ [PubMed]
48 ။ Gill TM, Castaneda PJ, Janak PH သည်။ Differential ဆုကြေးပြင်းအားအဘို့ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားသည်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် Medial Prefrontal Cortex နှင့်နျူကလိယ Accumbens Core ၏ Dissociable အခန်းကဏ္ဍ။ Cereb Cortex ။ 2010 ဧပြီ 1;
49 ။ သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Davidson က M, Spicer J ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ လူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်-based သင်ယူမှုအတွက် ventral frontostriatal circuitry ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို neuroscience ။ 2005 စက်တင်ဘာ 21;25(38): 8650-8656 ။ [PubMed]
50 ။ Brenhouse HC, Sonntag KC, Andersen က SL ။ prefrontal cortex projection အာရုံခံအပေါ်ယာယီ D1 dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုတိုးမြှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience မှဆက်ဆံရေးမျိုး။ J ကို neuroscience ။ 2008 မတ်လ 5;28(10): 2375-2382 ။ [PubMed]
51 ။ ဂိ FM ရေ, တေလာ JB, Cunningham MC ။ psychopathology ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ: အ postnatal ကာလအတွင်း medial prefrontal cortex အတွက် monoaminergic စနစ်များ convergence နှင့် plasticity ။ Cereb Cortex ။ 2000 အောက်တိုဘာ;10(10): 1014-1027 ။ [PubMed]
52 ။ Cunningham MG, Bhattacharyya S ကိုစေလွှတ် FM ရေ။ မွေးဖွားနှင့်လူကြီးအကြား GABAergic interneurons နှင့်အတူ amygdalar afferents ၏တိုးပွားလာ Interaction ။ Cereb Cortex ။ 2008 ဇူလိုင်;18(7): 1529-1535 ။ [PubMed]
53 ။ Tseng KY, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း prefrontal cortical interneurons ပြောင်းလဲမှုများ O'Donnell P. Dopamine မော်ဂျူ။ Cereb Cortex ။ 2007 မေလ;17(5): 1235-1240 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
54 ။ Seeman P ကို, Bzowej နယူးဟမ်းရှား, ဂွမ် HC, et al ။ ကလေးများနှင့်အိုမင်းလူကြီးများအတွက်လူ့ဦးနှောက် dopamine receptors ။ synapses ။ 1987;1(5): 399-404 ။ [PubMed]
55 ။ Tarazi FI, Baldessarini RJ ။ dopamine: D (1) ၏နှိုင်းယှဉ် postnatal ဖွံ့ဖြိုးရေး, D ကို (2) နှင့် D ကို (4) ကြွက် forebrain အတွက် receptors? int J ကို Dev မှ neuroscience ။ 2000 ဖေဖော်ဝါရီ;18(1): 29-37 ။ [PubMed]
56 ။ Teicher MH, Krenzel အီး, Thompson ကအေပီ, Andersen က SL ။ အဆိုပါ peripubertal ကာလအတွင်း Dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကိုကြွက်များတွင် NMDA အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် attenuated မပေးပါ။ neuroscience လက်တ။ 2003 မတ်လ 20;339(2): 169-171 ။ [PubMed]
57 ။ Andersen က SL, Thompson က AT, Rutstein M က, Hostetter JC, Teicher MH ။ ကြွက်များတွင် periadolescent ကာလအတွင်း prefrontal cortex အတွက် Dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကို။ synapses ။ 2000 သြဂုတ်;37(2): 167-169 ။ [PubMed]
58 ။ Weickert CS, et al Webster MJ, Gondipalli P ကို။ လူ့ prefrontal cortex အတွက် dopaminergic အမှတ်အသားများအတွက် Postnatal ပွောငျးလဲ။ neuroscience ။ 2007 ဖေဖော်ဝါရီ 9;144(3): 1109-1119 ။ [PubMed]
59 ။ Fonseca လမ်း, Ramos ဂျာဘွန်တစ်ဦးက, ဖာနန်ဒက်ဇ-Ruiz JJ ။ အစောပိုင်း postnatal အသက်အရွယ်ကနေဦးနှောက်ထဲမှာက်ဘ်ဆိုက်များကိုစညျး cannabinoid ၏ရောက်ရှိခြင်း။ NeuroReport ။ 1993;4(2): 135-138 ။ [PubMed]
60 ။ Gardner EL ။ အာရုံ၏ neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ: ဓာတုမှီခိုအတွက်ကုထုံးမဟာဗျူဟာများအတွက် "ဆုချို့တဲ့ syndrome ရောဂါ" ၏ဂယက်ရိုက်။ ခုနှစ်တွင်: အယ်လ်စတာ J ကို, အယ်ဒီတာ။ စွဲ: entries တွေကိုနှင့်တည်ရှိ။ နယူးယောက်: စယ် Sage; 1999 ။ စစ။ 57-119 ။
61 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1993 စက်တင်ဘာ-ဒီဇင်ဘာ;18(3): 247-291 ။ [PubMed]
62 ။ Volkow ND, Swanson JM ။ ADHD ရဲ့ကုသမှု methylphenidate ၏လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုကိုထိခိုက်ကြောင်း Variables ကို။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003 နိုဝင်ဘာ;160(11): 1909-1918 ။ [PubMed]
63 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်း။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2003;54: 25-53 ။ [PubMed]
64 ။ လှံကို L. ဆယ်ကျော်သက်များ၏အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ နယူးယောက်: WW Norton & Company; 2009 ။
65 ။ Forbes မဂ္ဂဇင်း EE, Ryan ND, Phillips က ML, et al ။ အကျိုးရှိသောကျန်းမာရေးဆယ်ကျော်သက်များ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု - အပျိုဖော်ဝင်ခြင်း၊ အပြုသဘောသက်ရောက်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010 ဖေဖော်ဝါရီ;49(2):162–172. e161–e165. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
66 ။ Romeo RD ။ အပျိုဖော်ဝင်စ: neurobehavioural ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း၏စည်းရုံးရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏ကာလ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2003 ဒီဇင်ဘာ;15(12): 1185-1192 ။ [PubMed]
67 ။ Forbes မဂ္ဂဇင်း EE, Dahl RE ။ Pubertal ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အပြုအမူ: လူမှုရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးသဘောထားတွေ၏ဟော်မုန်း activation ။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2010 ဖေဖော်ဝါရီ;72(1): 66-72 ။ [PubMed]
68 ။ Liston ကို C, et al Watts R ကို, စပါး N ကို။ Frontostriatal microstructure သိမြင်မှုထိန်းချုပ်အကျိုးရှိစွာစုဆောင်းမှု modulates ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2006 ဧပြီ;16(4): 553-560 ။ [PubMed]
69 ။ ကာဇီ BJ, Epstein ဖြစ်မှု, Buhle J ကို, et al ။ Frontostriatal ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ADHD နှင့်အတူမိဘကလေး dyads အတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007 နိုဝင်ဘာ;164(11): 1729-1736 ။ [PubMed]
70 ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွက် Asato MR, Terwilliger R ကို, ဝူး J ကို, Luna ခ White ကအရေးပါဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: တစ်ဦးက DTI လေ့လာပါ။ Cereb Cortex ။ 2010 ဇန်နဝါရီ 5;
71 ။ Durston S က, et al Davidson MC, စပါး N ကို။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူ focal cortical လှုပ်ရှားမှုမှပျံ့ထံမှတစ်ဦးကပြောင်းကုန်ပြီ။ Dev မှသိပ္ပံ။ 2006 ဇန်နဝါရီ;9(1): 1-8 ။ [PubMed]
72 ။ Luna B, Padmanabhan A, O'Hearn K. fMRI ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှတစ်ဆင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်။ ဦးနှောက်နှင့်အသိမှတ်ခံစားမှု။ 2010
73 ။ Astle DE, Scerif G. အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကိုထိန်းချုပ်လေ့လာဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိမြင်မှုမှ neuroscience အသုံးပြုခြင်း။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 2009;51(2): 107-118 ။ [PubMed]
74 ။ Luna B, Thulborn KR, Munoz DP, et al ။ ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေဦးနှောက် function ကို၏ရင့်ကျက်မှတ်ဉာဏ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ subserves ။ Neuroimage ။ 2001 မေလ;13(5): 786-793 ။ [PubMed]
75 ။ Bung လုပ် SA, Dudukovic မိုင်, Thomason ME, Vaidya CJ, Gabrieli JD ။ ကလေးများအတွက်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နုတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပံ့ပိုးမှုများကို: fMRI ထံမှသက်သေအထောက်အထား။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002 ဖေဖော်ဝါရီ 17;33(2): 301-311 ။ [PubMed]
76 ။ Bitan T က, ဗမာလူမျိုး DD, Lu က D:, et al ။ ကလေးများအတွက်ဘယ်ဘက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus ကနေဆီးအတားမရှိအထက်မှအောက်သို့မော်ဂျူ။ Neuroimage ။ 2006;33: 991-998 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
77 ။ Tamm L ကို, Menon V ကို, Reiss AL ။ တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်အတူဆက်နွယ်ဦးနှောက် function ကို၏ရင့်ကျက်။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002 အောက်တိုဘာ;41(10): 1231-1238 ။ [PubMed]
78 ။ Stevens MC, Skudlarski P ကို, Pearlson GD, Calhoun VD ။ အသက်အရွယ်-related သိမြင်လာဘ်ဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုပေါင်းစည်းမှုအပေါ်အဖြူကိစ္စဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ Neuroimage ။ 2009 ဒီဇင်ဘာ;48(4): 738-746 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
79 ။ Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, Jeffries NO, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ် longitudinal MRI လေ့လာမှု။ နတ် neuroscience ။ 1999 အောက်တိုဘာ;2(10): 861-863 ။ [PubMed]
80 ။ Huttenlocher PR စနစ်။ လူ့ဦးနှောက် cortex ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Morphometric လေ့လာမှု။ Neuropsychologia ။ 1990;28(6): 517-527 ။ [PubMed]
81 ။ ကာဇီ BJ, သောမတ်စ် KM, Davidson MC, Kunz K ကို Franzen PL ။ တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှု Compatibility ကိုတာဝန်နှင့်အတူကြီးထွား striatal နှင့် hippocampal function ကို Dissociating ။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2002;22(19): 8647-8652 ။ [PubMed]
82 ။ Bjork JM, Knutson B, Fong သည် GW, Caggiano DM, Bennett က SM, Hommer DW ။ မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမက်လုံးပေး-ရူးနှမ်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: တူညီနှင့်လူငယ်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004 ဖေဖော်ဝါရီ 25;24(8): 1793-1802 ။ [PubMed]
83 ။ Delgado MR, Nystrom LE, Fissell ကို C, Noll, DC, Fiez ဂျေအေ။ အဆိုပါ striatum အတွက်ဆုချခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုခြေရာခံ။ Neurophysiology ၏ဂျာနယ်။ 2000 ဒီဇင်ဘာ;84(6): 3072-3077 ။ [PubMed]
84 ။ Kuhnen CM, Knutson ခဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005 စက်တင်ဘာ 1;47(5): 763-770 ။ [PubMed]
85 ။ Matthews က SC, Simmons AN, ယာဉ်ကြော SD, Paulus အမတ်။ အန္တရာယ်-ယူပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens ၏ရွေးချယ် activation ။ Neuroreport ။ 2004 စက်တင်ဘာ 15;15(13): 2123-2127 ။ [PubMed]
86 ။ ကာဇီ BJ, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA ။ သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအပြောင်းအလဲများ။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2005 ဧပြီ;15(2): 239-244 ။ [PubMed]
87 ။ Boes အေဒီ, Bechara တစ်ဦးက, Tranel: D, Anderson က SW, Richman L ကို, Nopoulos P. ညာ ventromedial prefrontal cortex: ယောက်ျားလေးများအတွက်အရင်းခံတွန်းအားကိုထိန်းချုပ်တဲ့ neuroanatomical Correlate ။ Soc Cogn neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2009 မတ်လ;4(1): 1-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
88 ။ Vaidya CJ, Austin, G, Kirkorian, G, et al ။ တစ်ဦး functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုလေ့လာမှု: အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါအတွက် methylphenidate ၏ရွေးချယ်ဆိုးကျိုးများ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1998 နိုဝင်ဘာ 24;95(24): 14494-14499 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
89 ။ Epstein ဖြစ်မှု, Casey BJ, Tonev ST, et al ။ ADHD- နှင့် ADHD နှင့်အတူ concordantly ထိခိုက်နစ်နာမိဘကလေး dyads အတွက်ဆေးဝါး-related ဦးနှောက်ကို Activation ဆိုးကျိုးများ။ ကလေးစိတ်ပညာနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2007;48(9): 899-913 ။ [PubMed]
90 ။ Scheres တစ်ဦးက, Milham အမတ်, Knutson B, Castellanos FX ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါအတွက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း Ventral striatal hyporesponsiveness ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007 မတ်လ 1;61(5): 720-724 ။ [PubMed]
91 ။ Bjork JM, Knutson B, Hommer DW ။ အရက်သမား၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများအတွက်မက်လုံးပေး-ရူးနှမ်း striatal activation ။ စွဲလမ်း။ 2008 သြဂုတ်;103(8): 1308-1319 ။ [PubMed]
92 ။ Hardin MG, ဖွံ့ဖြိုးရေး-related အန္တရာယ်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အားနည်းချက်၏ Ernst အမ် Functional ဦးနှောက်ပုံရိပ်။ J ကိုစွဲ Med ။ 2009 ဇွန် 1;3(2): 47-54 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
93 ။ Johnston ld, O'Malley pm တွင်, Bachman JG, Schulenberg je ။ သော့ချက်တွေ့ရှိချက်များခြုံငုံသုံးသပ်ချက်, 2008: ဆယ်ကျော်သက် druge အသုံးပြုမှုအပေါ်အနာဂတ်အမျိုးသားရေးရလဒ်များကိုစောင့်ကြည့်။ Bethesda, MD: Druge အလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, 2009 ။ NIH ထုတ်ဝေမှုအမှတ် 09-7401 ed ။
94 ။ Witt ED ။ အရက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်သုတေသန: အခွင့်အလမ်းများနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်။ အရက်။ 2010 ဖေဖော်ဝါရီ;44(1): 119-124 ။ [PubMed]
95 ။ BF, Dawson DA ပေးသနား။ အရက်သုံးစွဲခြင်း၏စတင်ခြင်းနှင့် DSM-IV အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့မှာအသက်အရွယ်: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် longitudinal အရက် epidemiological စစ်တမ်းကနေရလဒ်တွေကို။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှု။ 1997;9: 103-110 ။ [PubMed]
96 ။ Li က TK, ဝစ် BG, Grant က BF ။ တစ်ဦးကရောဂါအတွက်သောက်သုံးရေ quantifying များအတွက်အနာဂတ်, ကုသမှုနှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးရှိပါသလား? အရက်အရက်။ 2007 မတ်လ-ဧပြီ;42(2): 57-63 ။ [PubMed]
97 ။ Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, စတိန်း RZ ။ dopamine ၏အခန်းက္ပ, မူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာတိုကျရိုကျ cortex နဲ့မှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2002 နိုဝင်ဘာ;78(3): 610-624 ။ [PubMed]
98 ။ Maldonado R ကို, Rodriguez က de Fonseca အက်ဖ် Cannabinoid စွဲ: အပြုအမူမော်ဒယ်များနှင့်အာရုံကြောဆက်စပ်။ J ကို neuroscience ။ 2002 မေလ 1;22(9): 3326-3331 ။ [PubMed]
99 ။ ပြင်သစ် ED, Dillon K သည်, Wu X တို့မှာ Cannabinoids အဆိုပါ ventral tegmentum နှင့် substantia nigra အတွက် dopamine အာရုံခံ excite ။ Neuroreport ။ 1997 ဖေဖော်ဝါရီ 10;8(3): 649-652 ။ [PubMed]
100 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008 အောက်တိုဘာ 12;363(1507): 3137-3146 ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
101 ။ Doremus TL, Brunell SC, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်စူးရှသောအီသနောထံမှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း Anxiogenic ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2003 မေလ;75(2): 411-418 ။ [PubMed]
102 ။ လှံကို LP သို့ Varlinskaya EI ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်။ အရက် sensitivity ကို, သည်းခံစိတ်နှင့်စားသုံးမှု။ မကြာမီက Dev မှအရက်။ 2005;17: 143-159 ။ [PubMed]
103 ။ Pautassi RM, Myers M က, လှံ LP သို့ Molina JC, လှံ NE ။ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အီသနော-mediated စာစားချင်စိတ်ကိုဒုတိယယူမှုကိုအေးစက်ပြ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008 နိုဝင်ဘာ;32(11): 2016-2027 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
104 ။ Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များ၏လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်အီသနော၏ acute သက်ရောက်မှု: စမ်းသပ်မှုအခြေအနေကိုကျွမ်း၏အခန်းကဏ္ဍ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2002 အောက်တိုဘာ;26(10): 1502-1511 ။ [PubMed]
105 ။ White ကလေး, Swartzwelder HS ။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအတွက်မှတ်ဉာဏ်နှင့်မှတ်ဉာဏ်-related ဦးနှောက် function ကိုအပေါ်အရက်၏အသက်အရွယ်-related ဆိုးကျိုးများ။ မကြာမီက Dev မှအရက်။ 2005;17: 161-176 ။ [PubMed]
106 ။ Sircar R ကို, Basak AK, Sircar ဃပြန်လုပ်အီသနောထိတွေ့ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် Spatial မှတ်ဉာဏ်၏ဝယ်ယူသက်ရောက်သည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2009 စက်တင်ဘာ 14;202(2): 225-231 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
107 ။ Sircar R ကို, ထပ်ခါတလဲလဲအီသနောကုသမှုထိတွေ့ Sircar ဃဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကြွက်အပြုအမူချို့ယွင်းရှိနေဆဲဟုပြသပါ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005 သြဂုတ်;29(8): 1402-1410 ။ [PubMed]
108 ။ လက်သမား-Hyland EP, Chandler LJ ။ NMDA receptors နှင့် dendritic ကျောရိုး၏အလိုက် plasticity: အရက်စွဲဖို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်၏တိုးမြှင့်အားနည်းချက်အဘို့အဂယက်ရိုက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2007 ဖေဖော်ဝါရီ;86(2): 200-208 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
109 ။ de ဝမ်း MD, Clark က DB, ဘီယာ SR, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်-စတင်ခြင်းအရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်အတွက် Hippocampal အသံအတိုးအကျယ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000 မေလ;157(5): 737-744 ။ [PubMed]
110 ။ Nagel BJ, Schweinsburg အေဒီ, ဖန် V ကို, Tapert SF ။ စိတ်ရောဂါ comorbidity မပါဘဲအရက်အသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အကြား hippocampal အသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2005 သြဂုတ် 30;139(3): 181-190 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
111 ။ ဘရောင်းလုပ် SA, Tapert SF ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်း၏လမ်းကြောင်း: လက်တွေ့လေ့လာမှုများအခြေခံ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004 ဇွန်;1021: 234-244 ။ [PubMed]
112 ။ မက်ဒီနာ KL, McQueeny T က, Nagel BJ, Hanson KL, Schweinsburg အေဒီ, Tapert SF ။ အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက် Prefrontal cortex volumes ကို: ထူးခြားသောကျားဆိုးကျိုးများ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008 မတ်လ;32(3): 386-394 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
113 ။ McQueeny T က, Schweinsburg ဘီစီ, Schweinsburg အေဒီ, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်မူးရူးသောက်များတွင်အဖြူကိစ္စသမာဓိရှိပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2009 ဇူလိုင်;33(7): 1278-1285 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
114 ။ Tapert SF, ချောင် Eh, Brown က GG, et al ။ အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များတွင်အရက်လှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003 ဇူလိုင်;60(7): 727-735 ။ [PubMed]
115 ။ Pulido ကို C, Brown က SA, တတ် K သည်, Paulus အမတ်, Tapert SF ။ အရက် cue reactivity ကိုတာဝန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2010 ဖေဖော်ဝါရီ;35(2): 84-90 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
116 ။ Monti pm တွင်, Miranda R ကို, Jr ကနစ်ဆင် K သည်, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်: အရက်များ, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005 ဖေဖော်ဝါရီ;29(2): 207-220 ။ [PubMed]
117 ။ Schweinsburg အေဒီ, Paulus အမတ်, Barlett VC ကို, et al ။ အရက်တစ်မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူလူငယ်အချို့အတွက်တုန့်ပြန်တားစီးထားတဲ့ FMRI လေ့လာမှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004 ဇွန်;1021: 391-394 ။ [PubMed]
118 ။ Deckel AW, Hesselbrock V. အပြုအမူနှင့်သိမြင်မှုတိုင်းတာသည့်ရွက်တိုင်ပေါ်ရမှတ်ခန့်မှန်း: တစ်3နှစ်အလားအလာလေ့လာမှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 1996 အောက်တိုဘာ;20(7): 1173-1178 ။ [PubMed]
119 ။ et al Tarter RE, Kirisci L ကို, Mezzich တစ်ဦး။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက် Neurobehavioral disinhibition ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါစတင်ခြင်းမှာအစောပိုင်းအသက်အရွယ်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003 ဇွန်;160(6): 1078-1085 ။ [PubMed]
120 ။ Behar: D, Berg က CJ, Rapoport JL, et al ။ High-အန္တရာယ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကလေးငယ်များအတွက်အီသနော၏အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှု: တစ်ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 1983 Fall;7(4): 404-410 ။ [PubMed]
121 ။ Dahl RE ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာ / စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ CNS Spectr ။ 2001 ဇန်နဝါရီ;6(1): 60-72 ။ [PubMed]
122 ။ ကုန်သည်များ RA, တေလာ JR, Potenza MN ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2003 ဇွန်;160(6): 1041-1052 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
123 ။ နယ်လ်ဆင် EE, Leibenluft အီး, လူယာ eb, ထင်းရူး DS ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လူမှုရေး Re-orientation ကို: လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် psychopathology ရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းအပေါ်တစ်ဦးမှ neuroscience ရှုထောင့်။ Psychol Med ။ 2005 ဖေဖော်ဝါရီ;35(2): 163-174 ။ [PubMed]
124 ။ Mannuzza S က, Klein RG ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါအတွက်ရေရှည်ဟောကိန်း။ ကလေးသူငယ်မြီးကောင်ပေါက် Psychiatric Clin N ကို Am ။ 2000 ဇူလိုင်;9(3): 711-726 ။ [PubMed]
125 ။ Mischel W က, ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေးအတွက် Underwood ခတူရိယာဆိုင်ရာ ideation ။ ကလေးသူငယ် Dev မှ။ 1974 ဒီဇင်ဘာ;45(4): 1083-1088 ။ [PubMed]
126 ။ ငြင်းပယ်ခံရ sensitivity ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဘို့မဟာဗျူဟာမြောက် Self-စည်းမျဉ်း: အို Ayduk, Mendoza-ဒဲ R ကို, Mischel W က, Downey, G, Peak PK, Rodriguez အမ်ဟာလူ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းညှိ။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 2000 နိုဝင်ဘာ;79(5): 776-792 ။ [PubMed]
127 ။ Tripodi SJ, Bender K ကို Litschge ကို C, Vaughn MG ။ တစ်ဦး Meta-သရုပ်ခွဲပြန်လည်သုံးသပ်: ဆယ်ကျော်သက်အရက်အလွဲသုံးစားမှုလျှော့ချမှုအတွက်ကြားဝင်။ Arch ကလေးမြီးကောင်ပေါက် Med ။ 2010 ဇန်နဝါရီ;164(1): 85-91 ။ [PubMed]
128 ။ Somerville LH, သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များကာဇီခ Developmental neurobiology ။ Curr Opin Neurobiol ။ 2010 ဖေဖော်ဝါရီ 16;